Serbia: “Fasisma Miafina” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2018 17:39 GMT
(Note: Fanamarihana: Navoaka ny karazany voalohany an'ito lahatsoratra ito, satria heverina fa tsy manaraka ny fenitra napetrak'ity tranonkala ity. Mba mariho fa ny ampahan'ny lahatsoratra ao amin'ny faritra fitanisàna dia teny avy amin'ny bilaogera izay tsy mpikamban'ny vondrom-piarahamonina akaikin'ny Global Voices.)
Nanoratra, indray andro, i Hermann Hesse: “Tsara ny miteny, fa tsara kokoa ny mangina!” Manaiky izahay Serba. Hiresaka momba ny pôlitikan'izao tontolo izao ny Serba, momba ny fifandraisana eo amin'ny Amerika sy Rosia, fa aleonay kokoa ny mangina momba ny zavatra izay mandeha ao amin'ny tokotaninay.
Tamin'ity herinandro ity, tsy nahavita naka teratany ao Batajnica ny mpanao gazety mba hiresaka amin'izy ireo momba ny vono olona roa sy famonoantena izay nitranga tao amin'ny tanànany. Fandikàna ny lahatsoratra lalina (SRP) nosoratan'i Queeria ao amin'ny Blog B92 tamin'ny 13 Jona ito manaraka ito, bilaogera Serba naneho ny heviny momba ny tantaran'ilay vono olona ary ahoana ny fifandraisan'izany amin'ny zavadoza taloha tao Serbia .
Omaly, notaterin'ireo masoivohom-baovao Serba rehetra ny vaovaon'ny mpihinana zava-mahadomelina izay namono olona antitra roa tamin'ny antsy tao Batajnica ary avy eo namono tena. Tena mahatsiravina!
Tonga avy hatrany ny mpanao gazety mba hijery an'ilay loza sy ny tany alohany. Fa na iray aza tsy nisy nety niresaka momba izany ireo manodidina.
Niseho ho tsy manantsiny daholo izy ireo, tahaky ny tsy nisy na iray aza nijerijery tao amin'ny tranon'ilay fianakaviana mampalahelo hatramin'ny omaly.
Ny mpanoratra ankafiziko indrindra, feminista, vehivavy mitia vehivavy, reny, [Afrikanina-Amerikanina], [Audrey Lorde], namela an'ity fehezanteny sarobidy ity ho toy ny lovany ho antsika: “Raha mangina ianao, tsy ho ianao mihitsy ianao”.
Fa vitsy amintsika […] no mino fa amin'ny fitenenena no afahantsika mamaha olana.
Izany rehetra izany dia mampatsiahy ahy an'ireo tantara momba ny tsy fahitana an'ireo toby fitànana faobe ary ny mponina tsy nahalala na inona na inona momba azy ireo.
Tanàna betsaka no nafindra mba hafahan'ny Nazi manangana an'i Auschwitz – fa tsy misy na mponina iray aza nahalala zavatra.
Rehefa tonga ireo gadra taloha, pelaka sy mpampanofa vatana, hanangana fahatsiarovana ho an'ireo niharan-doza tao Dachau tao aorinan'ny Ady Lehibe Faharoa, niteny koa ireo solontenan'ireo vondrona hafa izay voagadra taloha koa: “Tsy fantatray hoe iza ianareo!”
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba an'i [Srebrenica]
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ilay [kamio fampangatsiahana] feno faty.
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ireo [Bosniaka Silamo enina].
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ireo vehivavy voaolana nandritra ny ady.
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ny herisetra tao amin'ny fiarahamonina manodidina.
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ny fandrahonana ho faty natao ho an'ny vehivavy mitia vehivavy.
Tsy nisy nahalala na inona na inona momba ireo pelaka nampijaliana ara-nofo isan'andro.
Tsy nahalala na inona na inona momba ilay rojony sarobidy i [Ceca Raznatovic].
Mandeha ho azy fa tsy nisy nahalala izay niseho tao Batajnica.
Avy amin'izay rehetra voasoratra ireo, afaka manao famintinana telo aho:
Voalohany, tsy maintsy mitondra any amin'ny fasisma ny fahanginana momba ny ratsy.
Faharoa, mpiray tsikombakomba amin'ny fasisma ny olona izay mijanona mangina.
Fahatelo, be loatra ny fahanginana ao Serbia.
Manohitra ny fasisma aho ary tsy afaka hijanona hangina. Manana ny vidiny ny miteny, fa izay vidiny izay no mahatonga anao ho afaka.
Tahaky ny tenin'i Audrey, tsy mitondra zavatra betsaka ho ahy ny miteny, fa manakana ahy tsy ho tonga mpiray tsikombakomba.